Sangano - World March
Makumi gumi mushure mei 1ª World March sangano redu rinodzokera kuenderera mberi kusvika kune vanhu vakawanda
La 1ª Nyika Inofananidzira Rugare uye Kusagadzikana Akaita pedyo nezviitiko zvine chiuru mukati memizinda ye400 yaakatarisa kubva kunyika ye97 kumakondinendi e5. Zvinopfuura masangano e2000 akabatanidzwa. Inenge mazana maviri emakiromita makiromita akafamba uye mazana ezviuru zvevanhu vakabatanidzwa.
Nehuwandu hwechiitiko uye kuve nezviratidzo zvakakwana zvekubatanidzwa, rubatsiro uye kubatana kwakakura ... Zvinorongwa kuzadzikisa iyi 2ª World March for Runyararo uye Rusununguko 2019-2020.
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve 1ª March tine zvimwe zvekushandisa kuti tikupe iwe:
Iwe unokwanisa kuikandira nekuda kwehangu bhuku World March iyo inounganidza zvimwe zvezvinhu zvakanyanya kunaka zvechiito icho chikuru.
Iwe unogona kuziva zvakadzama zvakaitika pane webasa rekare rewebhu 1ª World March
Nokuti chii? Our Mission
Kutsiva mamiriro ezvinhu ane njodzi yenyika nekukura kukakavadzana, kuwedzerwa kwemari kune zvombo munguva apo munzvimbo dzakawanda dzenyika dzakawanda vanhu vanonoka nekuda kwekushaya zvokudya nemvura.
Kuenderera mberi kusika kuziva kuti zvinongova kuburikidza ne "rugare" uye "kusagadzikana" kwekuti marudzi evanhu achazarura ramangwana ravo.
Kuona maitiro akasiyana uye akasiyana-siyana maitiro akanaka ayo vanhu, vanhu pamwe chete uye vanhu vari kukura munzvimbo dzakasiyana-siyana mukuratidza kushandisa kodzero dzevanhu, kusasarura, kubatana, rugare pamwe chete uye kwete kusagadzikana.
Kupa izwi kune zvizvarwa zvitsva zvinoda kutora uye kusiya mararamiro avo, kuisa tsika yekusagadzikana mune zvekufungidzira pamwe, mune zvematongerwo enyika, mune zvematongerwo enyika, munharaunda ... Nenzira imwe chete iyo mumakore mashomanana kugadzirwa kwemhuka
The Promoter Teams (EP) iyo ichamuka kubva kuzviito nemapurojekiti anosimudzwa kubva munharaunda yemagariro, nemweya wekuti "mumwe nemumwe anotarisira zvaanenge achifarira".
Munyika dzine PD mumaguta akati wandei, Chikwata Chekukurudzira Nyika chinotsanangurwa. Mune aya EP, masangano akawanda sevanhu vanogona kutora chikamu.
Aya EP achazopihwa senge chimiro uye chimiro chebasa rakatwasuka, mafungiro ekubatana pamwe nekubvumirana kuronga zvirongwa.
Support Platforms (PA)
Izvo zvinoumbwawo nevanhu, mapoka uye kunyange masangano.
Izvi ndezviitiko zvekubatanidzwa izvo zvakapararira uye zvakasiyana zvakasiyana neEEPs, apo mazano akawanda anogona kupiwa, somuenzaniso nemasangano (vadzidzisi, vechidiki, vakadzi) kana nenzvimbo (musha, guta, yunivhesiti), nezvimwewo.
IA PA inofanira kunge ine mumiririri kana kuti inobatanidza ne EP yeguta.
Kuti urongedze kusiyana kwemazano, makamende uye kutenderera, nzvimbo yekubatana kwenyika dzakasiyana-siyana pakati penyika nenzvimbo inodiwa.
Nguva uye kupi?
La 2ªMM inotanga mukati Madrid el 2 Gumiguru, 2019, Zuva reMarudzi Rese rekusasvibisa, makore gumi mushure me 1ªMM. Ichabva muchitungamiri che Africa, North America, Central uye South, kudonha kusvika Oceania, pfuura Asia uye pakupedzisira Europe, kusvika Madrid March 8 we2020, Zuva reMadzimai Wepasi Pose. Mushure mekufamba-famba kwenyika nehurefu hwemazuva 159. Inofungidzirwa izvozvo 2ªMM Ichaenda kuburikidza nemamwe nyika ye100 uye mazana ezviuru zvevashandi vachabatanidzwa mune izvi zvese zvekuita.